Kutambudzwa kwevaKristu muNigeria | Apg29
Kutambudzwa kwevaKristu muNigeria
Chikonzero kuti vaKristu vanotambudzwa muNigeria raMwari Islamist nokudzvinyirirwa.
Kunyanya gumi inoti kuchamhembe Nigeria apo sharia mutemo Rinokura kudziviswa vaKristu nezviremera nokunogara kunze kutenda kwavo.
Kwoumhondi gumi nerimwe vaKristu
Munguva ichangopfuura, ndakanyora pamusoro kupondwa gumi vaKristu kwakaitika musi Christmas Day 2019. Mumwe wavo akapfurwa nemamwe halvshöggs gumi . Nyaya ane nguva Kunyora vaiva nemapoka anopfuura 5600 musi Facebook. Kwoumhondi vakanga kuitwa Boko harami, riri pasi Islamic mamiriro muNigeria.
Kune vanhu mamiriyoni 195,9 muNigeria iyo uwandu vaKristu 91.100.000. chitendero Nigeria ndiyo Islam uye chiKristu. The Constitutional System chinhu batana zvokuvhoterwa.
Izvi zvinooneka kunyanya vomuNigeria kuchamhembe chikamu, apo Islam ndiye chitendero chevoruzhinji, apo chiKristu chinopfuura kumaodzanyemba. The yairwisana madzinza kuchamhembe nokumaodzanyemba mipiro kuti kutambudzwa kwevaKristu.
VaKristu Most kumaodzanyemba kwenyika, pamusoro rusununguko rwokunamata dzavo, asi vaKristu kuchamhembe uye mabhandi vari pasi mhirizhonga Islamist mapoka.
mhirizhonga iyi zvinowanzoita nokurasikirwa zvose upenyu uye pfuma, uyewo mumuviri kukuvara. Somugumisiro mhirizhonga vari vaKristu anowiswa kubva munyika yavo, nokudaro achirasikirwa zvokurarama nazvo zvavo.
VaKristu kuchamhembe Nigeria, kunyanya Sharia rinoti, kuonekwa sevagari wechipiri-kirasi, rakatarira rusaruro uye vabve nenzanga.
VaKristu muMuslim yakabudirira vari kusangana kuramba kubva kumhuri dzavo uye kumanikidzwa kusiya chiKristu.
Mienzaniso kutambudzwa kwevaKristu Muslim
In kurwiswa musha wechiKristu February 2018 akauraya vanhu 106. Boko harami aiva shure kwacho, izvo zvakananga akanga kunangana varume mumusha.
vapristi maviri Tizenhet vanamati vakaurayiwa kana chechi yeKatorike Akatsoropodzwa fulaniherdar panguva mangwanani kunonamata muna April 2018. Pashure pokunge kurwisa akapa raiders munzanga uye rakaparadza 60 zvivako pasi pashure pokunge dzichapambwa navo.
In June 2018 akauraya 120 vaKristu fulaniherdar. Vakabirwa vari munzira musha kubva mariro Vakati vakarwiswa. Machechi akanga asina kunamata zuva nokutya mamwe kurwiswa.
On Christmas Day 2019 akauraya gumi VaKristu musoro uye kupfura.
Open Masuo .